Israa'el fi Paalistaayiin - BBC News Afaan Oromoo
Haati warraa Benjaamin Netaanyaahuu maallaqa mootummaa qisaasessuu amanan
Saaraa Netaanyaahuu maallaqa mootummaa qisaasessuun erga himatamaniin booda, qarshii doolaara 12,490 kaffaluufi.
Ministirri Muummee Israa'el Beenjaamiin Netniyaahoo marsaa shanaffaatiif mo'achuuf kan fedhan ta'ullee jeneraalli soorata bahe dorgomaa cimaa isaa ta'uun himamamaa jira.
Israa'eel haleellaa rokkeettii namoota madeesse hordofuun Gaazaa irratti haleellaa jalqabde
Israa'eel haleellaa rokkeettii namoota torba madeesse kan raawwate hidhattota Haamaasi jechuun himatti.
Dhimma Gaazaa waliin walqabateef ministirri ittisaa Israa'el aangoo gadhiisan
Ministirri Ittisaa Israa'el murtee kaabineen biyyattii lola milishoota Paalastaayin Gaazaa keessa jiran waliin guyyaa lamaaf ture akka dhaabatuuf murteessuu isaarraan kan ka'e aangoo isaanii gadi dhiisan.
'Biiraan addunyaarra umrii dheeraa' holqa Israa'eel keessatti argame
Qorattoonni biiraa abbaa umrii dheeraa holqa Israa'el bara durii keessatti arganne jedhu
Misiriin daangaa Gaazaa soomaafi bante
Misiriin dangaa tana yeroo tokko tokko banti, ammoo tuni marroo qaraa ta isiin guyyaa hedduu banaa dhiifte.
18 Caamsaa 2018
Mormii Gaazaa: Mormiin Gaazaa lubbuu heduu galaafate
Mormii lammiilee Paalastaayin 55 galaafatee, hedduu madeesse booda ammas mormii biraa eegalaa jiru warri Paalastaayin
15 Caamsaa 2018
Imbasii Jerusaalem: Aanga'oonni Ameerikaa sirna baniinsaarratti argamuuf
Aanga'oonni olaanoon Ameerikaa sirna baniinsa Imbasii irratti argamuuf jiru, lammiileen Paalestaayin garuu mormii dhageessisaa jiru.
14 Caamsaa 2018
Israa’el daandii dheeraafi gad-fagoo Gaazaa duuchite
Akka Waranaa Israa'elitti, daandiin lafa jalaa ta hidhatooti qotan, gaza Israa’el seentu ya duuchite.
16 Ebla 2018
Jarusaaleem: Israa'eel Buufata baaburaa maqaa Tiraampiin mogga'e naannoo Dallaa dhagaa dhihaatti ijaaruufi
Ministirri Geejibaa biyyattii magaala umurii dheeraa qabdu naannoo Dallaa dhagaa dhiiyaatti argamtutti sarara daandii baaburaa lafa jalaa ijaaruu akka barbaadaan beeksisaniiru.
Guwaatiimaalaan Imbaasiishee Tel Aaviiv irraa gara Jerusaaleem geessuuf akka ta'e beeksifte
Murteen biyyattii wayita Doonaaldi Tiraamp Jerusaaleemiin akka magaalaa guddoo teessoo mootummmaa Isaa'eelitti beekkamtii kennuun isaanii fudhatama dhabettiidha.
Jerusaalem: UN ejjennoo Tiraampi Jerusaalem irratti qaban kuffise
Biyyoonni addunyaa beekamtii Ameerikaan Jerusaalem magaalaa Israa'el jechuun kennite akka kaaftu dhaaman.
Biyyoonni Muslimaa Jaruusalem Bahaa 'magaalaa guddoo Paalestaayin ta'uu qabdi' jedhan
Hoggantoonni biyyoota Musliimaa 57, Ameerikaan Jaruusaleem akka magaalaa guddittii Israa'el taate beekamtii kennuun ishee seera qabeessa miti jedhan.
Netaanyaahuu: Waa'ee Yerusaalem ilaalchisee Paalestaayin dhugaa jiru fudhachuu qabdi
Ministeerri Muummee Israa'el Yeruusaalem ''takkaayyu magaalaa gudditti biyya biraa kammiyyuu hin turre'' jedhan.
Okkora murtee Tiraamp Yaruusalemiin booda
Viidiyoo mormitoota Paalestaayin fi wayita poolisoonni gaazii imimmaanessu, rasaasa gommaa fi rasaasaa itti dhukaasan.
Itoophiyaan embaasiishee gara Yerusaalemitti 'hin jijjiirtu'
Ministeerri dhimma alaa haala yeroo irratti dhaabbilee miidiyaaf ibsa kenneen, waa'ee baqattoota Liibiyaa keessaa, walitti dhufeenya Itiyoophiyaa fi Masrii akkasumas dhimma Yerusaalem irratti xiyyeeffateera.
Mootiin Sawudii Yerusaalem akka magaalaa guddittii Israa'el taatetti beekamtii kennuun "Musiliimaaf qoccolloo cimaadha" jedhan.
Dhaabbileen mirga namoomaa Ruwaandaaf xalayaa barreessan
Isiraa'eel dhiheenya kana keessa baqattoota dirqiin biyya isheetii baasuuf akka yaalaa jirtu dhagahameera. Ruwaandaanis afrikaanoota arii'ataman akka simattu fedhii agarsiisaa jirti. Tarii fedhii kana duuba waatu jiraa laata?
Gareen Paalastaayin Hamaas, morkataasaa kan ta'e Faataah waliin waldhabdee waggoota 10nii dhaabuuf waliigaluusaanii dubbatan.